Mepụta bootable USB gị na Linux distro | Site na Linux
Mepụta bootable USB gị na Linux distro
LiLi USB Onye Okike bụ usoro ihe omume n'efu maka Windows nke na-enye gị ohere ịmepụta bootable Live USB site na Linux distro ọ bụla.
Ihe omume a na-enyekwa ohere na-adọrọ mmasị: njedebe na-akpaghị aka iji gaa Linux na Windows na-enweghị nhazi ọ bụla ma ọ bụ nrụnye ọ bụla. Echere m, oké ...
LiLi USB Onye Okike Njirimara
ike bootable Live USB nke Ubuntu, Fedora, Debian, Damn Small Linux, Puppy Linux na ọtụtụ ndị ọzọ.
chekwaa ntọala nke mmemme ị na-eji n'etiti akpụkpọ ụkwụ.
Gbaa Linux ozugbo na Windows na VirtualBox dị na ya.
na-ezobe faịlụ ndị emepụtara na USB.
Budata LiLi USB Onye Okike si ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Mepụta bootable USB gị na Linux distro
Onyeka Onwenu2001 dijo
Daalụ maka ịza
Enwere m nkọwa zuru ezu… Achọrọ m ịwụnye distroki Linux na pc na-enweghị agụ ma ọ bụ CD / DVD recorder na ikike USB m (4GB) karịrị distro (4.7); Enwere ngwa na-enye m ohere ịme ihe yiri nke ahụ mana ịmepụta diski bootable na Hard Disk? (Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ikewapụ ma ọ bụ na ọ chọghị).
Ekele gị na n'ọdịnihu daalụ.
Ha, nsụgharị maka linux ga-abịa, nri? Ka ọ dị ugbu a, ana m ejikwa Unetbooting, ọ naghị arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ mana ọ na-agba 10 yana nsogbu ndị m na-eji ọtụtụ 😉
Zaghachi Lucas Matias Gomez
a na m dijo
Ndewo, daalụ maka onyinye: gaa na peeji m: reparamos.crearforo.com ma ọ bụ obodo m na taringa raara nye Puppy: http://www.taringa.net/comunidades/puppy
Ozugbo emechara, Live USB na-enye ohere itinye na Hard Drive?
Nke ahụ ziri ezi ... nke bụ echiche ahụ ...
Nwere ike ịnwale ya site na pendrive… ọ bụrụ na-amasị gị, ị ga-etinye ya.
Ọ bụrụ na ị masịghị ya ... ọ dịghị ihe na-eme. Remove wepu pendrive, regharịa akụrụngwa gị ọzọ na Winola ga-amalite ọzọ dị ka a ga - asị na ọ nweghị ihe mere. 🙂
Ọ DỊ MMA,
M na-agwa gị ihe m ga-eso nzọụkwụ m:
MGBE A: chọta ụdị DVD nke distro kachasị amasị gị
Rịba ama na ọtụtụ distros gụnyere nsụgharị ndị belatara. Dịka ọmụmaatụ, Linux Mint na-abịa na nsụgharị DVD na ụdị CD. Nanị ihe dị iche n’etiti ha bụ ọnụọgụ mmemme na kodeks, wdg. nke arụnyere na ndabara. Ihe kachasị mma n'okwu ndị a bụ ibudata ụdị CD ahụ ma, ebe ọ bụ na ịnweghị onye na-agụ ya, detuo ya na pendrive.
MGBE B: chọta ụdị "netinstall" nke distro kachasị amasị gị
Fọdụ, ma ọbụghị ihe niile, distros nwere ụdị "netinstall". Versiondị a dị obere ma wụnye ihe niile, kpamkpam, site na ịntanetị. Chọpụta, nke a bụ ezigbo ihe ngwọta ma ọ bụrụ na ị nwere brọdband internet njikọ.
PLAN C: chọọ distro nke ị nwere ike ịgba na 4 gb pendrive.
PLAN D: nkebi draịvụ ike na-agba ọsọ ihe oyiyi si na nkebi
ma wụnye Linux na ngalaba nke ozo.
Nke a bụ ihe mgbagwoju anya na nke kachasị atụ aro. Echiche ga-abụ
1) Nkewa nke draịvụ ike (ọ bụrụ na ịnweghị ya nkewa ma ọ bụ
i nweghi draịvụ ike ọzọ).
2) M gbasoro usoro ndị akwadoro n'isiokwu a:
3) Reboot akụrụngwa, na-agba ọsọ ahụ distro kwukwara na aga na nzọụkwụ gị
GRUB 2 ma wụnye ya na ngalaba nke ọzọ (ya bụ, ọ bụghị n'otu ebe ebe
echekwara ihe oyiyi ISO).
Nkọwa: nkewa dị mkpa naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye Linux. Na
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnwale distro, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị dị na
isiokwu a na-atụ aro na-enweghị nkewa ihe ọ bụla.
Enwere m olileanya na m nwere enyemaka ụfọdụ.
Site na yapa, ana m ahapụrụ gị isiokwu 2 nwere ike ịmasị gị:
Ndewo, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ịkekọrịta usoro a nke dịịrị m mfe
http://docs.kali.org/downloading/kali-linux-live-usb-install M nwara ya na arch image na ọ na-arụ ọrụ zuru okè. Cheers
Kwuo NO Tax Windows!